गर्मीमा लामखुट्टेबाट बच्ने ६ काइदा !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्मीमा लामखुट्टेबाट बच्ने ६ काइदा !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : असार ४, २०७९
आर्युबेदिक पद्धतीबाट समेत लामखुट्टे भगाउन सकिन्छ, भलै यो प्रयोग सबैको लागि सहज नहुन पनि सक्छ । घरको झ्याल ढोकामा तुलसीको बोट रोप्नाले पनि लामखुट्टेको प्रकोप कम हुने बताइन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार